Mpanamboatra rivet sy fifamatorana rivet China ZHJ
Vidin'ny FOB: US $ 0,001- $ 1,2 / Piece
Ny rivet matevina dia manome fanamby lehibe kokoa rehefa miala. Ny lohany vita dia tsy maintsy totoina na alefa alohan'ny hamerenany ilay rivet hiverina amin'ny lavaka. Rehefa manala rivet matevina dia tsy maintsy dinihina ny akora amin'ilay singa manodidina ny lavaka. Raha malefaka kokoa noho ilay rivet ny fitaovana, dia misy ny voka-dratsy mety ho simba. Raha toa ka mitovy na mafy kokoa noho ny rivet ny hamafiny dia ambany kokoa ny fahavoazana, satria hitazona ny endriny izy io ary atosika hiverina hamaky ilay rivet malefaka kokoa. Ny fomba nananganana ny rivet voalohany dia mitana anjara toerana amin'ny fizotran'ny rivet. Arakaraka ny maha-lehibe ny fivontosana shank noforonina tamin'ny fizotran'ny fananganana, no vao mainka mety hitera-doza ny singa manodidina.
D (MG) Ny hatevin'ny loha
T (MG) Savaivony tongotra
D (MG) Ny halavan'ny tongotra
L (MG) Taratra boribory
~ 0,45 8,56
Previous: OEM Mpanamboatra Erti5 Titanium Welding Wire - Silver Alloy Wires - ZHJ
Manaraka: Bimetal Contact Rivet
Fifandraisana Silver Rivet